पर्साका म्यादी प्रहरीको बिदाइ
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले भर्खरै सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका बताए । म्यादी प्रहरीहरूलाई बिदाइ गर्न नारायणी र·शालामा आयोजित बिदाइ समारोहमा प्रजिअ बजिमयले मीठो स्मरण र अनौठो अनुभवलाई व्यक्तिगत जीवनमा समेत लागू गरी अनुशासित जीवन बिताउन म्यादी प्रहरीहरूलाई आग्रह गरे । निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सफल पार्न इमानदारिताका भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिंदै प्रजिअ बजिमयले म्यादी प्रहरीहरूको सुखद भविष्यको कामना गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले म्यादी प्रहरीहरूले तीनहप्ते तालिममा सिकेका सम्पूर्ण सीपलाई ड्युटीका बेला राम्ररी पालन गरी गुनासोको मौका नदिएका बताए । पर्सामा खटाइएका ८९५ जना म्यादी प्रहरीहरूमा २०२ जना महिलाहरू थिए । बिदाइसँगै एकजना म्यादी प्रहरीले डेढ महिना कार्य गरेबापत करिब २७ हजार रकम पाएका छन् ।
पथलैयामा जङ्गली हात्तीको आतङ्क
प्रस, पथलैया, १५ मङ्सिर/ राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट ज·ली हात्ती गाउँ पसेपछि पथलैयाका स्थानीय बासिन्दा शनिवार साँझदेखि त्रसित बनेका छन् । बारा र पर्साका विभिन्न स्थानबाट हात्तीको आक्रमणमा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको खबर आइरहेका बेला ज·ली हात्ती बस्ती पसेपछि सर्वसाधारण त्रसित बनेका हुन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट शनिवार साँझ पथलैयास्थित थानीमाई मन्दिर हुँदै हात्ती बस्ती पसेको स्थानीय पूर्णबहादुर मगरले जानकारी दिएका छन् । हात्ती बस्ती पसेपछि स्थानीयबीच भागाभाग मच्चिएको मगरले जानकारी दिए । हात्तीका कारण त्रसित स्थानीय एकजुट भएर बसेका छन् । हात्ती धपाउनका लागि सम्बन्धित निकायले शीर्घ चासो देखाउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
क्रिएटिभ फूटबल प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १५ मङ्सिर/ विश्व अपा· दिवसको उपलक्ष्यमा क्रिएटिभ स्कूल्स ग्रुपद्वारा आयोजित अन्तर विद्यालय फूटबल प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ । आज सम्पन्न जुनियरतर्फको खेलमा ग्रीनल्यान्ड माविले ओसिस माविलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । त्यस्तै सालोम माविले पीसजोन माविलाई पनि १–० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत सिनियरतर्फको खेलमा सालोम माविले ग्रीनल्यान्ड माविलाई २–१ गोलअन्तरले र ओसिस माविले पीसजोन माविलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजको खेल मैदानमा आयोजित समापन समारोह पीसजोन माविका प्रधानाध्यापक होरिल साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
कृषिकाममा बढ्दो यान्त्रिकीकरण
- उमाशङ्कर द्विवेदी श्रीमद्भागवदगीताको दशौं अध्यायमा विभूति वर्णनको क्रममा श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ– मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकर: । अर्थात् महिनाहरूमा मार्गशीर्ष र ऋतुहरूमा बसन्त मै हुँ । निस्सन्देह मार्गशीर्ष महिना, जसलाई नेपाली भाषामा मङ्सिर तथा भोजपुरी भाषामा अगहन महिना भनिन्छ,ले धार्मिक महत्व त राख्छ नै किसानहरूका लागि पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । जेठ, असार महिनामा खेतमा मानो फाल्ने काम हुन्छ भन्ने मङ्सिर महिनामा मुरी भित्र्याउने चटारो परेको हुन्छ । खेतमा तयार रहेको मुख्य बाली धानको कटाइ, बन्हनी, दाइँ, ओसवनी जस्ता कठिन कार्यहरूको चटारो हुन्छ । यो महिना बाली भित्र्याउने कामका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन दलहनी, तेलहनी, तरकारी तथा दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको गहुँको बीउ छर्ने मुख्य समय पनि यही महिना हो । धानबाली काटेर खेतमैं सुकेर तयार हुनका लागि लहरै फिजाएर राखिएको हुन्छ, जसलाई भोजपुरी भाषामा ‘पसइ’ भनिन्छ । केही दिन घाममा सुकिसकेपछि धानको झारको सानो सानो खुल्ला मुठा बनाइन्छ, जसलाई भोजपुरी भाषामा ‘पन्जियावल’ भनिन्छ तथा त्यस मुठालाई ‘पान्जा’ पनि भनिन्छ । परालक
क्रोध स्वयम्को लागि घातक
क्रोध आएमा मनुष्यको ज्ञान नष्ट हुन्छ । क्रोधाक्रान्त मनुष्यलाई यो थाहा हुँदैन कि उसले के भनिरहेको छ र के गरिरहेको छ ? क्रोधमा आएर अधिकांश मानिसले आफ्नै हानि गरिरहेको हुन्छ । दुई परस्पर विरोधी व्यक्तिहरूमा जो अपेक्षाकृत धेरै शान्त र सन्तुलित रहन्छ, उसैले जित्छ । बुद्धिमान मानिसले आफ्नो शत्रुलाई क्रोधले होइन कि शान्तिले नष्ट गर्छ । क्रोधी व्यक्ति जब एकपटक कसै एकजनासँग क्रुद्ध हुन्छ, तब उसको सन्तुलन यहाँसम्म बिग्रन्छ कि उसले अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि क्रोधपूर्ण व्यवहार एवं वार्ता गर्न थाल्छ र यस प्रकार उसले आफ्नो अरू विरोधी बनाउँछ । क्रोधी व्यक्ति जब कसैमाथि क्रुद्ध भएर उसको केही बिगार्न सक्दैन, तब आपैंmमाथि क्रोध गर्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा क्रोधी व्यक्तिले आपैंmलाई दण्ड दिने र आफ्नै हानि हुने कार्य गर्न थाल्छ । क्रोधले मनुष्यलाई पागलको अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छ । बुद्धिमान एवं मनीषी व्यक्तिलाई क्रोध आए पनि क्रोधको आक्रमण आफूमाथि हुन दिंदैनन् । उसले विवेकको सहारा लिएर त्यस अनिष्टकर आवेगमाथि नियन्त्रण गर्छ र सम्भावित हानिबाट बच्छ । प्रचेता एकजना ऋषिका पुत्र थिए । स्वयम्
स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब हुन्छ– नेपाल
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब गर्नेतर्फ पहल भइरहेको बताएका छन् । एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा नेता नेपालले तीन/चार महिनापछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि तयारी हुने हुँदा कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन दिए । उनले भर्खरै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित हुनेहरूलाई हताश नहुन र पराजयको कारण पहिचान गर्न सुझाव दिए । नेता नेपालले विभिन्न कारणले पार्टी परित्याग गरेका साथीहरूलाई फर्कन आह्वान गरेका छन् । नेता नेपालले नामै किटान गरी पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्य उर्मिला अर्याललगायतलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरे । मधेसी दल र एमाओवादीले जनतालाई झूटो आश्वासन दिएकाले संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको नेता नेपालले बताए । उनले सङ्घीयताको सवालमा राष्ट्रिय एकता एवं सद्भाव कायम गर्ने गरी बहुपहिचानसहितको सङ्घीयतामा एमाले रहेको प्रस्ट पारेका थिए । उनले संविधान जारी गर्न एमाले र काङ्ग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आएकोले माओवादीलगायतका दललाई समेटेर लगिने बताए । नेता
सुन र हुन्डीका कारण भारुको अवमूल्यन
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ सीमावर्ती नेपाली शहर वीरगंजमा आधा दशकपछि भारु रुपैयाँको अवमूल्यन भएको छ । आधा दशकसम्म नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएर १६० नेरुको १०० भारु हुनुपर्नेमा प्रतिसैकडा ८ रुपैयाँसम्म बट्टा तिरेर भारु लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै हटेको छ । कारोबारीहरूले भारु रुपैयाँको अवमूल्यन भएको बताएका छन् । अवमूल्यन हुनुको दुई प्रमुख कारणमध्ये पहिलो सुनको कारोबार र दोस्रो हुन्डीको कारोबार रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भारतमा सुनको भन्सारदर वृद्धि भएपछि नेपालबाट भारततर्फ सुन तस्करी बढेको र दिल्लीमा हुन्डीको दर महँगो भएपछि नेपाली व्यापारीहरूले स्रोत नखुल्ने रकम हुन्डीमार्फत् दिल्ली पठाउन छाडेपछि भारुको सञ्चय बढेको र माग घटेपछि बजारमा भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन भएको हो । अहिले सुन कानुनीरूपमा दैनिक २० किलो नेपाल भित्रिने भएपनि गैरकानुनीरूपमा ठूलो परिमाणमा चीनबाट नेपाल आउने र भारत जाने क्रम बढेसँगै भारतीय रुपैयाँ नेपाल भित्रिएपछि भारुको अभाव हटेको हो । व्यवसायीहरूले हालका दिनमा नेरु १५५ मा भारु १०० प्राप्त भइरहेको बताएका छन् । यसको पुष्टि
रौतहट काङ्ग्रेसमा निराशा
प्रस, रौतहट, १४ मङ्सिर/ नेपाली काङ्ग्रेसको किल्लाको रूपमा चिनिएको यहाँको दुई नम्बर क्षेत्रमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले जित हासिल गरेपछि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ । क्षेत्र नं. २ मा फोरम लोकतान्त्रिकका मोहम्मद मुस्ताक राजा विजयी भएका छन् । २००७ सालदेखि नेता शेष इद्रिस निर्वाचित हुँदै आएको सो क्षेत्रमा उनको निधनपश्चात् भतिजा मोहम्मद आफताब आलम निर्वाचित हुँदै आएपछि सो क्षेत्र काङ्ग्रेसको किल्लाको रूपमा परिणत भएको थियो । काकाको प्रभावले नै काङ्ग्रेस मजबुत भएको सो क्षेत्रमा विगतको निर्वाचनसम्म आलमले पनि जित हासिल गरेर साख जोगाएकोमा काङ्ग्रेसमा उत्साह बढेको थियो । काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्घात र चुनावी रणनीतिमा पार्टीको जिल्ला नेतृत्वको कमीकमजोरीले पराजय भोग्नुपरेपछि काङ्ग्रेस वृत्तमा अहिले निराशा देखिन्छ । क्षेत्र नं. १ मा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विजयी हँुदै आएपनि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले सो क्षेत्र छाडेपछि उनी सो क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए । यसपालि क्षेत्र नं. १ बाटै नेता नेपालले उम्मेदवारी दिएपछि सो क्षेत्रबाट उनी न
अन्तरविद्यालय फूटबल प्रतियोगिता शुरू
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ विश्व अपा· दिवसको उपलक्ष्यमा क्रिएटिभ स्कूल्स ग्रुपको आयोजनामा आजदेखि वीरगंजमा अन्तरविद्यालय फूटबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजको खेल मैदानमा शुरू भएको सो फूटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको पनि उपस्थिति थिए । आज सम्पन्न जुनियरतर्फको उद्घाटन खेलमा ग्रीनल्यान्ड माविले पिसजोन माविलाई १ का विरुद्ध २ गोल गरी विजय हासिल गरेको थियो । यसैगरी दोस्रो खेलमा टाइब्रेकरबाट ओसिस माविले सालोम माविलाई १ का विरुद्ध २ गोलको अन्तरले पराजित गर्‍यो । सिनियरतर्फको खेलमा भने सालोम माविले ओसिसलाई १ का विरुद्ध २ गोलले र ग्रीनल्यान्ड माविले पिसजोन माविलाई शून्यका विरुद्ध १ गोलको अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
कपट–द्यूतमा अन्तिम बाजी–२
- उमाशङ्कर द्विवेदी प्रहरी रित्तै हात फर्किआएको देखेर दुर्योधनले भाइ दु:शासनसित भने,“भाइ, यो प्रहरी भीमसेनसित तर्सिरहेको छ, त्यसैले तिमी आपैंmले गएर द्रौपदीलाई समातेर सभामा ल्याऊ ।” दाइको आज्ञा सुनेर दु:शासनले आँखा रातो पारेर पाण्डवहरूको निवासमा गएर द्रौपदीसित भन्यो,“कृष्णे, हिंड जाउँ, तिमीलाई हामीले जुवामा जितेर धर्मत: तिमीलाई पाइसकेका छौं । अब सभामा उपस्थित भएर कौरवहरूको सेवा गर ।” दु:शासनको कठोर वचन सुनेर द्रौपदीको ह्दय दु:खले भरियो । उनी आर्तभावले मुख छोपेर राजा धृतराष्ट्रको निवासतिर दुगुरिन् । पापी दु:शासनले उनलाई हकार्दै पछि पछि दुगुर्दै गएर कपाल समातेर तान्न थाल्यो । द्रौपदीको रोम रोम काम्न थाल्यो । शरीर निहुरियो । उनी सभातिर तानिंदै गइरहेकी थिइन् । द्रौपदीले सुस्तरी भनिन्,“हरे मूढ दुरात्मा दु:शासन, म नछुने भएकी छु, म एकवस्त्रा भएकी छु । यस्तो अवस्थामा मलाई सभाबीचमा लग्नु अनुचित हुनेछ ।” दु:शासनले द्रौपदीको कुरातिर ध्यान नदिएर कपाल झन् झन् जोडले तान्दै भन्न थाल्यो,“दु्रपदकी छोरी, तिमी नछुने भएकी होस्, एकवस्त्रा भएकी होस् वा ना·ी भएकी होस् हामीले तिमीलाई जुवामा जितेका छौं । त
मन रमेको बेला
- सञ्जय साह ‘मित्र’ सफलतामा खुशी मान्ने मन नै हो । आफ्नो अनुकूल कुनै पनि कुरा सुन्दामात्र पनि मानिसको मन रमाउनुलाई मनको नैसर्गिक अधिकार मान्न सकिन्छ । मनै त हो, रमाउने उसको स्वतन्त्रता हो तर मन जति परतन्त्र अरू कोही छैन । जहिले पनि अरूको सफलतामा रमाउने वा अरूकै विफलतामा विस्मात मान्ने । यस कारण मानिस मनको भएर बस्नुहुँदैन । मनको मात्र भएर बसिदिने हो भने यो एकदमै चञ्चल हुन्छ र चञ्चलताले जीवनलाई स्थायित्व दिन सक्दैन । जुन जीवनमा कुनै किसिमको स्थायित्व छैन भने त्यसलाई के जीवन भन्ने र खै ? जीवन हुनत उसको आफ्नो चञ्चल मनमाथि नियन्त्रण गरेर जीवनले लिएको बाटोमा आउने उकालो–ओरालोमा भिजाउनुपर्छ । मनले जता डोर्‍यायो उतै गइदिनेले त कहीँ न कहीँ लक्ष्य भेट्टाउँछ । रजनीशले भनेका छन् कि जे मनमा आउँछ मज्जाले गर तर यसमा कसैको मन दुखाउनु नपरोस् । कति मज्जाको कुरा । मनमा आएको कुरा मज्जाले गर्ने तर अरूको मनलाई कुनै पनि किसिमको ठेस पुग्ने गरी केही नगर्ने कुरा त साँच्चिकै आनन्दको छ । हरेकको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ वा भनूँ हरेक मनको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ । यस कारण अरू मनलाई नोक्सानी गर्ने काम एउटा मनले
नेताहरूले ‘भैंसी र जुम्रा’ दुवै हेर्न सक्नुपर्छ
- बैद्यनाथ ठाकुर संविधानसभा निर्वाचन २०७० को प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाली काङ्ग्ेरस १९६ सिट प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ भने नेकपा एमाले १७६ सिट ल्याइ दोस्रो ठूलो दल भएको छ । २०६४ सालमा गठन भएको पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी यतिबेला ८० स्थान पाएर तेस्रो ठूलो दलको रूपमा नेपाली राजनीतिमा देखापरेको छ । चुनावी परिणामबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । मतदाता तथा स्वयम् दलहरूसमेत अचम्मित भएका छन् । सर्वत्र चमत्कारिक रहस्यबारे चर्चा भइरहेको छ । चुनावी परिणाम रातारात कसरी पल्टियो ? जनताले मत दिएर वा नदिएर ? यस्तो अनपेक्षित चुनावी परिणाम स्वाभाविक ढ·ले आएको हो वा कुनै विशेष डिजाइन अन्तर्गतको जालझेल, धाँधली, षड्यन्त्रले गर्दा हो ? यतिखेर मतपरिणाम नै सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी सत्तरी प्रतिशत मतदान भएको भनेकोमा समानुपातिकसमेतको मतगणना सकिंदा ८१ प्रतिशत मत खसेको पुष्टि भएको र निर्वाचन आयोगले भनेकोभन्दा १३ लाख मत बढी भेटिएको छ । मतपेटिकाभित्र ११ प्रतिश
संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि बारा जिल्लास्थित मधेस केन्द्रित दलहरूले चुनाव हार्नुको कारणबारे अन्तक्र्रिया तथा छलफल गरेका छन् । जिल्लाका अगुवा नेताहरूको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रमले मधेस केन्द्रित दलहरू विभाजन हुनु नै पराजयको मुख्य कारण भएको ठहर गरेको छ । उनीहरूले मधेसी दल एकताको उद्घोष बारा जिल्लाबाट शुरू गर्ने र त्यसले पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षहरूलाई समेत पार्टी एकीकरणका लागि दबाब पुग्ने विश्वास लिएका छन् । चुनावमा पराजयपछि जिल्लास्तरमा संयुक्त भेला गरेर मन्थन गरिएको र फुट नै हारको मुख्य कारण हो भन्ने निचोडसहित एकताको खाँचो औंल्याउनेमा मधेसका जिल्लाहरूमध्ये सम्भवत: बारा जिल्ला पहिलो हो । हुनत संविधानसभा चुनावअगावै पनि बारास्थित मधेस केन्द्रित दलहरूको संयुक्त अन्तक्र्रिया भएको थियो । त्यतिबेला पनि उनीहरूले चुनावी कार्यगत एकता तथा तालमेल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोबारे आआफ्नो पार्टी केन्द्रलाई सुझाव दिने र सुझाव नमाने आफूहरूले जिल्लास्तरमा भएपनि कार्यगत एकता गरेर जाने सल्लाह गरेका थिए । तर त्यो सल्लाह बालुवाको डल्ला सरी फुटेर गयो र कार्यान्वयन हुन सकेन । पहिलो
पहिलो काम संविधान निर्माण– वक्ताहरू
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ प्रेस चौतारी, पर्साले आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले संविधान निर्माणका साथै जनतालाई दिएका विकासका वाचाहरू प्रतिबद्ध भएर पूरा गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय होटल मकालुमा आयोजित बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मध्यमाञ्चल संयोजक महेश दासले निर्वाचित भएसँगै जिम्मेवारी थप भएकोले जनतालाई दिएका वाचाहरू पूरा गर्न सुझाव दिए । उनले एमाले पार्टीको घोषणापत्र र क्षेत्रमा जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गरेको खण्डमा आगामी दिनमा विजयी उम्मेदवारहरूलाई सहज हुने बताए । उनले विगतका दिनमा आश्वासन पूरा नगरेर जनताको मन दुखाउने कार्य भएकोले नयाँ अनुहारहरूले मौका पाएको बताउँदै मौका उपयोग गर्न पनि सुझाव दिए । प्रतीक दैनिकका प्रधान सम्पादक जगदीशप्रसाद शर्माले जनतालाई दिएका आश्वासनहरूमध्ये पहिलो जिम्मेवारी संविधान निर्माण र त्यससँगै विकासका कार्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । निर्वाचित भएसँगै जिम्मेवारी थपिएको र थपिएका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कार्य पनि कठिन भएकोले विजयी उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्ध भएर जनहितमा कार्य गर
अपहरणको अभियोगमा पक्राउ परेका पाँचजना जेल चलान, तीनजना रिहा
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १३ मङ्सिर/ बारा, निजगढ ८ बाट नेशनल भेट सेन्टरका सञ्चालक अपहृत ३० वर्षीय भगवान बडालको अपहरणमा संलग्न रहेको आशड्ढामा प्रहरीले पक्राउ परेका जिल्ला रौतहट कनपुर– ५ सिमरी बस्ने वर्ष ४० को रावण माझी, ४३ को दिलीप माझी, ३४ की फूलमाया माझी, २३ की मीना माझी, २३ वर्षीय विद्या देवी कछरियालाई थुनछेक आदेशमा १ नं न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेलको एकल इजलासले पुर्पक्षका लागि वीरगंज कारागार चलान गरेको श्रेस्तादार भट्टराईले बताए भने कनकपुर–५ सिमरीका ६० की रेखाकुमारी माझी, १८ वर्षीया जया कछरिया, रौतहट जिल्ला, कटहरिया–३ का ६० वर्षीय जादोलाल महतोको संलग्नता प्रमाणित नभएपछि जनही १० हजार धरौटीमा रिहा गरिएको श्रेस्तादार भट्टराईले बताए ।
महमुद हत्याकाण्डका आरोपीहरूबारे थुनछेक बहस शुरु
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १३ मङ्सिर/ एमाले बारा क्षेत्र नं. ४ संविधानसभा निर्वाचनका तत्कालीन उम्मेदवार महमुद आलमको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूबारे बिहीवारदेखि बारा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस शुरु भएको छ । अदालतको ५ नं इजलासमा पक्राउ परेका पूर्व सभासद् रामचन्द्र प्यासीलगायत भारत अलीगढ जिल्ला भई पर्सा निवासी अशोक श्रीवास्तव भन्ने अतिक खान, भारत बिहारको पूर्वी चम्पारण रक्सौल–४ डंकन रोड बस्ने ईश्वरप्रसाद श्रीवास्तव भन्ने राजु श्रीवास्तवको सम्बन्धमा थुनछेक बहस शुरु भएको अदालतका श्रेस्तादार रोशन कुमार भट्टराईले बताए । जाहेरवाला अर्थात् वादी पक्षबाट अधिवक्ताहरू गणेशप्रसाद दाहाल, सन्तोष श्रीवास्तव, महम्मद रफिक मियाँ, एकरामुल हक, मुमताज अहमद र जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले थुनछेकमा बहस गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतिवादीमध्ये प्यासीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रमन श्रेष्ठ, वीरेन्द्रप्रसाद यादव, कृष्णमुरारी रौनियार, मनमोहन तिमिल्सिना, ओमप्रकाश केशरी, उमेशप्रसाद जैसवाल, रामचन्द्र सिह, प्रभातचन्द्र दाहाल, सन्तोष कुमार गुप्ता, परमहंस केशरी र योगेन्द्र प्रसाद धानुक
संविधानसँगै आर्थिक स्थायित्व
- शीतल महतो संविधानसभाको सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई दरिलो गरी स्थापित भएको देखाएको छ । अझ ७० प्रतिशतको ऐतिहासिक मतले मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन खोजिरहेको विश्वास सबलरूपमा प्रकट भएको छ । आम नेपालीको कम्तीमा पनि देशमा एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू होस् भन्ने चाहना थियो । लोकतन्त्रमा चुनावबाहेक यस्तो अर्को कुनै प्रक्रिया हुनै सक्दैनथ्यो । चुनावपछि सहज ढ·ले नयाँ नेपालको नयाँ खाका कोर्ने, नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानलेखन र आर्थिक विकासको बाटो सुगम हुने आशाका साथ आम नेपालीले अनेकौं चुनौती सामना गरेर भएपनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा होमिए र चुनावलाई ऐतिहासिकरूपमा सम्पन्न गराए । नेपाली जनताको उत्साह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र त्यसलाई हाँक्ने दलहरूप्रति कायमै राख्न उनीहरूले सहजरूपमा जीविका चलाउन पाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ । पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति सर्वसाधारणको माग हो । यदि दलहरूले यी सर्वसाधारणका नैसर्गिक अधिकारलाई संरक्षण नगर
चुनाव परिणाम र आर्थिक विकासको सवाल
- वीरेन्द्रकुमार यादव चुनावको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक नभए पनि को कति हैसियतमा छ भन्ने अनुमान भइसकेको छ । पहिलो काङ्ग्रेस, दोस्रो एमाले तथा तेस्रो एमाओवादी भए पनि कसैले पनि सामान्य बहुमत पाएन । यस परिणामको आधारमा जनताले यी तीनै दलको मुद्दालाई पूर्णरूपले स्वीकार स्वीकार गरेन । हुनत यी तीनै दलको मुद्दा पूर्णरूपले अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यी तीनैको साझा मुद्दा पहिलो एक वर्षमा संविधान बनाउने अनि बाँकी समय मुलुकको विकास गर्ने रहेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र अनि धर्मनिरपेक्षता पनि सबैको साझा मुद्दा हो । पहिले चौथो शक्ति रहेको मधेसवादी दलहरूको आकार विगतभन्दा सानो बने पनि जनताले मधेसको मुद्दालाई अस्वीकार गरेको छैन । त्यो अस्वीकार नगर्ने कारण पनि छ । मधेसको प्रमुख मुद्दा सङ्घीयता, समावेशिता र मधेस विकास हो । मधेसका यी साझा मुद्दा काङ्ग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीको पनि साझा एवं प्राथमिकतामा परेको मुद्दा रहेकोले मधेसबाट काङ्ग्रेस, एमालेको जित भएर मधेसको मुद्दा अनुमोदन भएको पुष्टि भएको छ । जनताले कुनै मुद्दालाई पूर्णरूपले अस्वीकार गरेको छ भने त्यो हो सङ्घीयताविरुद्धको मुद्दा । सङ्घीयत
विश्व–दास नक्सामा नेपाल
- ई. गोपाल श्रेष्ठ अस्ट्रेलियाको ध्बपि ाचभभ ायगलमबतष्यल ले गत अक्टोबर १७ मा ध्यचमि :बउ या क्बिखभचथ प्रकाशित गर्‍यो । विश्वका १६२ देशहरूलाई समेटेको यो अध्ययन रिपोर्टले हाम्रो देशलाई धेरै दास (स्लेभ) राख्ने देशहरूको नकारात्मक सूचीको पाचौं स्थानमा राख्यो । यो तथ्यले स्पष्ट गर्छ कि हाम्रो मानसिक धरातल धेरै कमजोर छ । उक्त रिपोर्टले हामी मुखले उदार भए तापनि व्यवहारले धेरै नै सड्ढीर्ण छौं भन्ने स्पष्ट गर्छ । हाम्रा शीर्ष नेताहरू कार्यकर्ताको पिठ्यूँमा बसेको तस्वीरहरू हामी बराबर छापामा देख्छौं । यस्तो तस्वीरले पनि हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र उजागर गर्दछ । बोलीमा हामी सामन्त विरोधी छौं तर व्यवहारमा हामी त्यही नै प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौं । यस्तो कुरा अप्रिय हो । तर, वास्तविकता यही नै हो । दास/स्लेभ पटक्कै नराख्ने देशहरूमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, लक्जमबर्ग र नर्वे परे भने एकदमै राख्ने देशहरूमा अफ्रिकी देश मौरिटियाना, हैटी र एसियाली देशमा पाकिस्तानी, भारत र नेपाल परे । सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने भारतको स्थान अग्रपङ्क्तिमा छ । भारतपछि चीन, पाकिस्तान र नाइजेरिया आउँछ । भारतमा १,३९,५६,०१० द
सबक मधेसवादी दललाई
- श्रीमन्नारायण मिश्र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मतपरिणामहरू सार्वजनिक भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)का निम्ति उत्साहवद्र्धक रह्यो भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसवादी दलहरूका निम्ति लज्जास्पद । यस निर्वाचन परिणामपश्चात् सफलता पाएका राजनीतिक दलहरूले मात्तिने र पराजित दलहरूले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । विजेताहरूको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ भने पराजितहरूले आत्मविश्लेषण एवं समीक्षा र थप जिम्मेवार भएर जानुपर्ने अवस्था छ । यस निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूको लज्जास्पद पराजयको कारण खोतल्नु आवश्यक छ । विसं २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूको सङ्ख्या चार थियो । उनीहरूले दुई स्वतन्त्र गरी चार दर्जन जति सीट प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । यसपालिको निर्वाचनमा पुरानो मधेसवादी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर नेसपा (युनाइटेड) र नेसपा (गजेन्द्रवादी) गरी तीन, मधेस फोरम, फोरम (गणतान्त्रिक) र तराई मधेस अभियानबाहेक नेपालीभाषी तराईवासी शरत् सिंह भण्डारीले खोलेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गरी ६ तथा तराई मधेस लोकतान
विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी नेपालले यसपालि जीत हासिल गरेको छ । कुनै पनि कार्यको सफलतम परिणति त्यस क्षेत्रको उच्चतम अवस्थामा पुग्नु हो । विश्वकप क्रिकेटको औपचारिक सुरुआत भएको १७ वर्षपछि नेपालले त्यसमा खेल्ने अवसर पाएको छ । विश्वकपमा खेल्नका लागि आयोजित छनोट प्रतियोगितामा विजय हासिल गरेर नेपाल छानिएको हो । यो छानिनु कसैको कृपाले नभएर नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको लगन, मेहनत तथा कर्तव्यनिष्ठाले सम्भव भएको हो । कसैले भोट दिएर वा दया गरेर छनोटमा परेको होइन । कुनै पनि कार्य गर्दा त्यसमा लगन भएको, उक्त कार्यसम्बन्धी रणनीति बुझेको तथा पोख्त खेलाडीको चयन भयो भने कार्यसिद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले प्रमाणित गरेको छ । विदेशमात्र घुम्ने रहरले काखापाखा गरेर, आफ्नो नजिकको चिनजान भएको खेलाडीको चयन भएको भए यो जीत सम्भव हुने थिएन । अहर्निश क्रिकेटप्रति समर्पित खेलाडी र तिनको निरन्तर अभ्यास तथा जीतप्रति उत्कण्ठा नै यस विजयको कारण हो । क्रिकेटको यस जीतको सन्दर्भलाई नेपालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन र त्यसमा विजयी भएका सभासद् एवं तिनको संविधाननिर्माणप्रति निष्ठासँग
संविधान निर्माण र विकास कार्यप्रति प्रतिबद्ध पर्साका नवनिर्वाचित सभासद्हरू
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ पर्सा जिल्लाबाट संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा विजयी भएका ५ क्षेत्रका नवनिर्वाचित सभासद्हरूले संविधान निर्माण र विकास कार्यलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दोहर्‍याएका छन् । प्रतीकसँग कुरा गर्दै पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट विजयी नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्रबहादुर अमात्यले संविधान निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । उनले संविधान निर्माणका साथै स्थानीय विकासलाई पनि प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रादेशिक राजधानीका साथै पर्सा, बारा औद्योगिक कोरिडोरको घोषणा, आर्थिक राजधानीको मुद्दालाई प्राथमिकता दिंदै वीउवासङ्घले उठाएको ग्रेटर वीरगंजको अवधारणालाई सफल पार्न आफ्नो प्रयास रह्ने बताए । उनले सङ्घीयतालगायत राष्ट्रिय मुद्दाको सन्दर्भमा पार्टीले उठान गरेका विचार नै आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन् । यसैगरी पर्सा क्षेत्र नं. २ बाट विजयी एमालेका नवनिर्वाचित सदस्य विचारी यादवले पनि संविधान निर्माणलाईं पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । उनले संविधान निर्माणका साथै स्थानीय विकासमा आफ्
पर्सा आरक्षबाट निस्केको हात्तीले भारतमा पनि एकजनाको ज्यान लियो
ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १२ मङ्सिर/ पर्सा आरक्षबाट निस्केर जीतपुर गाविस–९ सहजानपुरमा एकजनाको ज्यान लिएर सीमापारी पुगेको हात्तीले गएराति एक भारतीय नागरिकको पनि ज्यान लिएको छ । हिजो राति ८ बजे भारत बिहार मानपुर थाना इमुलिया टोल निवासी ४० वर्षीय गवारी लकडा हात्तीको आक्रमणबाट मारिएका छन् । हात्तीको आक्रमणबाट लकडाको ज्यान गएको छ भने थप चारजना घाइते भएका र भोला राम, इब्राहीम मियाँ, सतन महतोलगायतको भखारी भत्काएको छ । हात्ती हिजो दिनभरि भारतीय सीमानजिक रहेको उखु खेतमा बसेको र बेलुकी निस्केर इमुलिया टोलमा आतड्ढ मचाएको थियो । मृतक स्थानीय गवारी लकडा आफ्ना एक साथीसँग रातिपख जाँड खाएर आइरहेको बेला हात्तीले सुँडले हिर्काएर पेटमा कुल्चेपछि लकडाको मृत्यु भएको र अर्का एकजना घाइते भएका छन् । सो हात्ती मानपुर ज·लमा पसेको मानपुर थानाका प्रभारी प्रमोद प्रसादले बताए । यसैबीच पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट शड्ढरसरैयाको सखुनी ज·ल हुँदै हात्तीको बथान ग·ोल खोलामा देखा परेपछि शड्ढरसरैया, जीतपुर, महादेवपट्टि, सेढवाका बासिन्दा आतड्ढित भएका छन् । आज साँझ साढे ५ बजेतिर ग·ोल खोलामा ६ वटा हात्तीको बथान देखिएको स्
पोस्टर–पम्पलेट हटाउने जिम्मेवारी कसको ?
- सुरेश विडारी संविधानसभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि वीरगंजका मुख्य चोक गल्लीहरूमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विभिन्न दल र उम्मेदवारको प्रचारका लागि पोस्टर–पम्पलेट टाँस्नुको साथै तुल ब्यानरहरू, झन्डा टाँगिएका छन् । निर्वाचन कार्यालयहरूले पनि मतदाता शिक्षाका लागि पोस्टर–पम्पलेटहरूको प्रयोग गर्‍यो । प्रचार प्रसारका लागि सस्तो तरिका र आवश्यक ठानेर त्यसको प्रयोग गरियो होला । अब त चुनाव पनि सकिसकेको छ । चुनावको परिणाम पनि आइसकेको छ । भन्नुको मतलब अब ती पोस्टर–पम्पलेटहरूको औचित्य छैन । ती पोस्टर, तुल, ब्यानरहरू अब काम नलाग्ने भइसकेका छन् । त्यसले प्रवाह गरिरहेको सूचना अब अनावश्यक भइसक्यो, महत्त्वहीन भइसक्यो । तर त्यो हटाउने कसले ? जसले टाँस्न वा टाँग्न लगायो उसले, उपमहनगरपालिका वा स्थानीय प्रशासनले ? यसको उत्तर खोज्ने बेला भएको छ । त्यस्ता पोस्टर, पम्पलेटहरू र ब्यानरहरूले वीरगंज नगरको अलिअलि भएको सुन्दरतालाई पनि कुरूप बनाइदिएको छ । उसै त वीरगंज साँघुरो, फोहोर, त्यसमाथि जुनसुकै पर्खाल र भित्ताहरूमा म्याद गुज्रेको पोस्टर पम्पलेट । आफ्नो शहर सफा र सुन्दर राख्नु हामी सबैको
अब सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न
- सञ्जय साह ‘मित्र’ निर्वाचनले अभूतपूर्व सफलता देखाउँदै ऐतिहासिकता देखायो । सधैं जे हुन्थ्यो यसपालि त्यही भयो । सबको कल्पना र अपेक्षाविपरीत अप्रत्याशितरूपमा कसैको हार र कसैको जीत भएर देखापरेको निर्वाचनले देशी तथा विदेशी संस्थाहरूको आकलनसमेतलाई धराशायी बनायो । परिवर्तन र प्रगति चाहनेहरूले देशमा नराम्रो वा अकल्पनीय पराजय भोग्नुपरेको परिदृश्य छ । अहिले एक हिसाबले देश फेरि २०४८ सालको निर्वाचनको परिणामपछिको अवस्थामा पुगेको छ । त्यतिबेला पूर्ण बहुमतसहित नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा थियो । यी दुवै दलभन्दा निकै कम स्थान लिएर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले नौ स्थान प्राप्त गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहले गर्दा सरकारले स्थिरता पाएन । मध्यावधि निर्वाचन भयो र कसैको बहुमत नआए पनि २०५१ मा एमाले अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो । यसले गर्दा देशमा केही प्रगतिशील कामहरू भएको कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिरको नतिजा आइरहँदा कतिपयले २०१५ सालको निर्वाचनको परिणामको सम्झना गरेका छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइ
जनताको पार्टी बन्ने सन्देश
दुनियाँमा कहीं नभएको संविधानसभाका लागि दोस्रोपटक नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले नेपाली जनताले हरेश खाएको छैन, हताश भएको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । मतदाता न्याय गर्न निपुण छ भन्ने सन्देश पनि यस निर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ । त्यसैले आदर्शका ठूला–ठूला कुरा गर्ने, काम भने केही नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई पाखा नै लगाएको त होइन, तर सबक सिकाएको छ । अब राजनीतिक दलहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने उनीहरू ठूला र महत्त्वपूर्ण होइनन्, जनता/ मतदाता ठूलो हो, महत्त्वपूर्ण हो । अन्यथा समग्रमा मतदाताको मनस्थिति उही छ, जुन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा देखिएको थियो । खासगरी माओवादी र मधेसी दलहरू जसले यस निर्वाचनमा पराजय बेहोरे, उनीहरूले मतदाताको यस निर्णयलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । मधेसवादी दल जसलाई क्षेत्रीय पार्टीको संज्ञा दिइएको छ, किन उनीहरू यसरी अप्रत्याशितरूपले बढारिए । मधेसी जनताले त उनीहरूलाई मत दिएकै हो, उनीहरूले बरु मतको समन्वय गर्न सकेनन् । क्षेत्रीयबाट जातीय बने, साम्प्रदायिक बने–आफैं सङ्कुचित भए । कम्तिमा पर्सा, बारा र रौतहटमा मत परिणामको जुन अवस्था दे